ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် “ကောင်းကင်ယံ : သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် လေကြောင်းပြပွဲ ကျင်းပ - Xinhua News Agency
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် “ကောင်းကင်ယံ : သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် လေကြောင်းပြပွဲ ကျင်းပ
မော်စကို၊ မေ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် “ကောင်းကင်ယံ : သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် လေကြောင်းပြပွဲ၌ လေယာဉ်များ တင်ဆက်ပြသနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် “ကောင်းကင်ယံ : သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် လေကြောင်းပြပွဲအတွင်း လေယာဉ်တစ်စင်း ပျံသန်းရန် ပြင်ဆင်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် “ကောင်းကင်ယံ : သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် လေကြောင်းပြပွဲ၌ လေယာဉ်တစ်စင်း တင်ဆက်ပြသနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် “ကောင်းကင်ယံ : သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် လေကြောင်းပြပွဲ၌ ပြည်သူများ လာရောက်လေ့လာနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် ယခုနှစ်အတွက်လေကြောင်းပြပွဲကို “ကောင်းကင်ယံ : သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် မေ ၂၂ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျဖြစ်သော အဆိုပါ ပြပွဲ၌ လေယာဉ်အလှပြပျံသန်းနည်းအဖွဲ့များ၊ ရှေးခေတ်လေယာဉ်ပုံစံများ၊ ရဟတ်ယာဉ်များက တင်ဆက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သလို ပြည်တွင်းထုတ်လေယာဉ်များ ပြိုင်ပွဲလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Aviation festival “SKY: theory and practice” held in Moscow, Russia
1-An aircraft performs during the aviation festival “SKY: theory and practice” in Moscow, Russia, May 22, 2021. The festival is held annually in Moscow featuring performances by aerobatics teams, vintage airplanes, helicopters andacompetition of homemade aircraft. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
2- Airplanes perform during the aviation festival “SKY: theory and practice” in Moscow, Russia, May 22, 2021. The festival is held annually in Moscow featuring performances by aerobatics teams, vintage airplanes, helicopters andacompetition of homemade aircraft. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
3- An airplane prepares to take off during the aviation festival “SKY: theory and practice” in Moscow, Russia, May 22, 2021. The festival is held annually in Moscow featuring performances by aerobatics teams, vintage airplanes, helicopters andacompetition of homemade aircraft. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
4- An aircraft performs during the aviation festival “SKY: theory and practice” in Moscow, Russia, May 22, 2021. The festival is held annually in Moscow featuring performances by aerobatics teams, vintage airplanes, helicopters andacompetition of homemade aircraft. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
5- (210523) — MOSCOW, May 23, 2021 (Xinhua) — Airplanes perform during the aviation festival “SKY: theory and practice” in Moscow, Russia, May 22, 2021. The festival is held annually in Moscow featuring performances by aerobatics teams, vintage airplanes, helicopters andacompetition of homemade aircraft. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
6- 7-(210523) — MOSCOW, May 23, 2021 (Xinhua) — People visit the aviation festival “SKY: theory and practice” in Moscow, Russia, May 22, 2021. The festival is held annually in Moscow featuring performances by aerobatics teams, vintage airplanes, helicopters andacompetition of homemade aircraft. (Photo by Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
အီတလီ စီးရီးအေတွင် စီရော်နာဒို ရွှေဖိနပ်ဆု ဆွတ်ခူးရရှိ ၊ ကမ္ဘာ့စံချိန်ထပ်မံတင်နိုင်ခဲ့
အားလုံးအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိရန် အလေးထားဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ရောမမြို့တွင် ကျင်းပ